Abantu abaningi abacabangi ukuphila okujabulisayo ngaphandle kwabantwana. Umndeni uqala lapho ababili bekhetha ukuhlala ndawonye futhi banakekele, ngokuhamba kwesikhathi umbuzo uvela mayelana nokuvela kwelungu lesithathu lomndeni. Kodwa ukuthi ungaqonda kanjani ukuthi usulungele ukuba ngabazali , yini edingekayo ukuqinisekisa ukuthi ingane ihle kuwe, futhi wena naye?
Esikhathini sethu, abantu abaningi kakhulu bathambekele ekubhekiseni inkinga yokubukeka kwezingane ngokuziphendulela. Isimo sokuqala lapho ukubukeka kwengane kuzokwenzeka khona kubhekwa njengobungane obuhle phakathi kwabashade. Ngempela, uma abazali besikhathi esizayo bengakwazi ukuvumelana phakathi kwabo, uma izingxabano nezigameko zihlala zikhona emndenini, ingane ngeke isuse izinkinga, kodwa ithulule kuphela amafutha emlilweni. Umuntu omncane uzogula emndenini lapho abazali bengakwazi ukuthandana.
Isimo sesibili sinempilo. Ukuze ukhulelwe, ubekezele, ubelethe futhi ukhulise ingane, udinga amandla amaningi nempilo enhle. Isinqumo esifanele siyobe sinakekele impilo yakho kusengaphambili -yeka ukubhema, ukunciphisa ukusetshenziswa kotshwala, ungafaki imithi engayithinta impilo yengane. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuqeda izifo ezithile, ukuhlolwa ngokugcwele nodokotela, futhi ngokucophelela uhlole izingozi ezingenzeka. Lokhu kuyadingeka ukuze uthathe izinyathelo ezifanele uma kuphakama izinkinga, ukuxazulula inkinga ngesikhathi. Ngezinye izikhathi kufanele ulinde ngaphambi kokuba uthathe isinqumo ngokukhulelwa, ezinye zidinga ukwelashwa okujulile ngisho nokuhlinzwa. Konke lokhu kungcono ngaphambi kokuba ingane ifike, ukuze ukukhulelwa kungathwali umphumela wezifo ezihlukahlukene.
Esinye isici esithonya isinqumo mayelana nokuvela kwengane kuyisimo sezinto ezibonakalayo. Ngempela, imindeni enakho, lapho uhlala khona, lapho kukhona khona imali engenayo, okwanele kuwo wonke umuntu, kulula ukuhlela ukuzalwa kwengane. Emva kokuvela kwengane, omunye wamalungu omndeni ngeke akwazi ukusebenza isikhathi eside uma kungenakwenzeka ukuqasha umsizi noma ukubandakanya izihlobo ekukhuliseni kwengane. Lokhu kusho ukuthi ukugcinwa komndeni kuzokwehla ngokuphelele emahlombe kwelinye ilunga lomndeni, ngokuvamile ubaba. Hhayi yonke imindeni inenzuzo yelungu lomndeni elilodwa okwanele lokudla okunye.
Ngakho-ke, abantu abaningi baqala ukuxazulula izinkinga ngezindlu, benze imali edingekayo, umsebenzi bese bekhetha ukuba nengane.
Kodwa abanye abakulungele ukulinda isikhathi eside noma bangaboni amathemba, kodwa abafuni ukuhlehlisa kabusha ukuzalwa kwengane.
Ngethemba lokuhle kakhulu.
Akuwona wonke umuntu olungele ukulinda, ukuze abe nengane. Ngezinye izikhathi ukukhulelwa kwenzeka ngaphambi kwesikhathi. Ezimweni ezinjalo, abazali bavame ukulungele ukuvela komntwana, kodwa baxazululwe ngesikhathi ezalwa, kungakhathaliseki ukuthi yini.
Mhlawumbe kule miindeni kunezinkinga ezingaxazululwa ezihlobene nempilo, kungenzeka kube nezinkinga zempahla nokunye ukungavumelani, kodwa lokhu akusho ukuthi abazali abanjalo bayoba kubi. Izingane ziyisikhuthazo esinamandla sokuqhubekela phambili. Ngesikhathi esifushane, abazali bekusasa kuyodingeka baxazulule izinkinga eziningi, balungiselele ukubukeka kwengane futhi bamnike ukuba khona okufanelekayo.
Into eyinhloko akukhona ukuyeka futhi ungathembi ukuthi izinkinga zixazululwa ngokwazo. Izingane zibaluleke kakhulu, kuwumthwalo omkhulu futhi labo abanquma ukuba nengane emndenini wabo kufanele benze konke ukuzama ukushintsha izimpilo zabo zibe ngcono. Ngisho nangesikhathi ukhulelwe, ungenza okuningi - ukuthuthukisa impilo yakho ngaphansi kokuqondiswa odokotela, uqale indlela yokuphila enempilo, uthole umsebenzi omuhle, uqhubeke nemfundo yakho futhi ulungiselele ukuzalwa kwengane yakho.
Kuvela ukuthi akudingekile ukubala impilo yakho iminyaka ezayo, ukuhlehlisa ukuzalwa kwengane isikhathi eside. Kubalulekile ukuzwa okusemandleni akho, ikhono lokushintsha okuthile okungcono, isifiso sokwenza okuthile ukuze kuzuze umndeni wakho. Futhi-ke, okubaluleke kakhulu yisifiso esiqotho sokuba nomntwana. Ngaphansi kwalezi zimo, ngisho nokukhulelwa okungahleliwe kungajabula, futhi ukuzalwa kwengane ngeke kulethe izinkinga kuphela, kodwa nenjabulo enkulu. Konke kuncike kulokho umzali ngamunye ezimisele ukwenza njalo ukuze bonke abathandekayo bakhe futhi yena ngokwakhe ujabule.
Abazali kufanele baqaphele ukuthi bangakhetha kanjani umfaniswano wesikole somuntu wokuqala
Uzochitha kuphi iholidi ehlobo nezingane
I-Horoscope, iziphi izimpawu zengane ye-Zodiac ezizozalwa ngo-2017
Isobho sePea nenkukhu ebhemayo
Shining smile of girls
Amantongomane aseSpain aseNdiya
Yini ebukeka njengamadoda kwabesifazane?
Indlela yokudla kahle uma wenza i-aqua aerobics
Ikhishi lokuklama ngaphakathi
Isinkwa esimnandi nge-orange